Football Khabar » कोलम्बियासँग हारेपछि के भने अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक र कप्तानले ?
कोलम्बियासँग हारेपछि के भने अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक र कप्तानले ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा प्रमुख उपाधि दाबेदारमध्येको एक टिम अर्जेन्टिना पहिलो खेलमा कोलम्बियासँग २–० ले पराजित भयो । प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले कप्तान लिओनल मेस्सीसहित पहिलो रोजाइका खेलाडी मैदान उतारे पनि अर्जेन्टिनाले हार पन्छाउन सकेन । अर्जेन्टिनाले २ गोल खाँदा आफूले गोलको खाता नै खोल्न सकेन ।
यो हारपछि अर्जेन्टिनाको उपाधि जित्ने अभियानमा नमिठो झट्का लागेको छ । कप्तान मेस्सीमाथि अझै दबाब बढेको छ भने टिम अप्ठेरोतर्फ धकेलिएको छ ।
कोलम्बियासँग अप्रत्यासित हार व्यहोरेपछि अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक स्कालोनीले टिमले आफ्नो योजनाअनुसार खेल्न नसकेको बताए । उनले आफ्ना खेलाडीले स्तरअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको निचोड निकालेका हुन् ण्।
‘हामी जे हौं, त्यहीअनुसार मैले योजना बनाएको थिएँ । तर, मेरा खेलाडी सुरुबाटै नसोचेको दबाबमा परे,’ स्कालोनीले खेलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कुनै पनि पोजिसनका खेलाडी नचल्दा हामीले स्कोर गर्न सकेनौं । जब फुटबलमा गोल नै हुँदैन भने कसरी खेल जित्ने ?’
स्कोलोनीले पहिलो खेलको ३ अंक गुमाए पनि प्रतियोगिततामा अझै सम्भावना रहेको बताए । ‘हामीले महत्त्वपूर्ण ३ अंक गुमायौं । यो नतिजाबाट म पटक्कै खुसी छैन । तर, अझै दुई खेल बाँकी छन् । हामी दुई खेल जितेर अर्को चरण जान चाहन्छौं,’ स्कालोनीले भने ।
आगामी खेलमा कप्तान मेस्सीले आफ्नो लय समात्ने विश्वास उनले लिए । ‘यो टिममा जब मेस्सीजस्ता खेलाडी चल्दैनन्, स्कोर गर्न कठिन हुन्छ । मलाई आशा छ, अबका खेलमा उनी लयमा फर्किनेछन्,’ स्कालोनीले भने ।
त्यसैगरी, खेलपछि मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै कप्तान मेस्सीले यो आलोचना गर्ने समय नभएको बताए । आफूहरू पुनः जागृत भएर आउने उनले बताए । ‘यो आलोचना वा गुनासो गर्ने समय होइन । हामी हारको विन्दुबाट पुनः उठ्नुपर्छ र एकताबद्ध भएर थप संघर्ष गर्नुपर्छ,’ मेस्सीले भने ।
मेस्सी सन् २०१८ मा रसियामा भएको विश्वकपपछि पहिलो अफिसियल प्रतियोगितामा अहिले राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका छन् । यसअघि उनले कोपाको तयारीका रूपमा मध्यअमेरिकी क्षेत्रको सानो देश निकारागुवासँगको खेलमा २ गोल गरेका थिए । निकारागुवा फिफाको वरीयतामा १२९ स्थानमा टिम हो ।
अर्जेन्टिनाले अब अर्को खेल आगामी बिहीबार पराग्वेसँग खेल्दैछ । पराग्वेले भने आफ्नो समूहको पहिलो आज राति कतारसँग खेल्दैछ । आज राति यी दुईको खेल बराबरीमा रोकिँदा अर्जेन्टिनालाई फाइदा पुग्छ ।
प्रकाशित मिति १ असार २०७६, आईतवार ०२:४४